Enye izidingo zomuntu obaluleke kakhulu - nesidingo sokuba nolwazi olusha kanye self-ngcono. Ngakho-ke, abantu ukufunda ezinye izilimi, ukudlala imidlalo, ukufunda zomculo. At inhliziyo amakhono ngamunye ukuthola ulwazi. On ngokushesha kangakanani umuntu efunda incike ijubane lokufunda yayo into entsha.
Isivinini sokufunda - kungcono ngendlela emangalisayo amakhono awusizo enkosini ukuthi akudingeki namakhono akhethekile. Uma une-ke isifiso, ukuzimisela isikhathi esincane, ngeke kube lula ukuze balukhulume funda ngesivinini ekhaya.
Kungani ukufunda ngokushesha
Ukuze abe wusizo ekuthuthukiseni ukufunda ngejubane? Impendulo yalo mbuzo silula. Wonke umuntu efuna ukwazi entsha, lokhu kuyikhono kuyoba usizo. Ukufunda ukufunda ukufunda ngejubane, futhi bachitha izinyanga ezimbalwa kwi ukuze balukhulume kule nqubo ku umkhuba, ungakwazi ke ukugcina omningi ngesikhathi.
Ngakwelinye, ukufunda kancane ngaso sonke isikhathi nyama. Abantu abaningi abaqondi niqede incwadi ngaphambi kokuphela kwalo ngenxa semali isikhathi. Futhi, ukufunda kancane, amathuba ukuba baphelelwe isithakazelo endabeni futhi aphinde aphonse ncwadi ngaphandle kokuba ufunde.
Kwamanye Ochwepheshe ukufunda izincwadi ezifanele - iyingxenye imisebenzi umsebenzi, enikeza ithuba zikhule, ukuthuthukisa kanye ube uchwepheshe ebhizinisini. Ukuze laba bantu ukuze balukhulume funda ngesivinini inqubo - ngokudingeka okhokhelwayo.
Uyini funda ngesivinini
Ake uchaze ukuthi kuyinto funda ngesivinini futhi ijubane ngawo ngesikhathi esifanayo udinga ukufunda.
Standard kubhekwa isivinini okuqonda ka 150-250 emagama ngomzuzu. Kulokhu, ikhasi kutheksthi lebhaliwe ichithwa imizuzu 1-3. Isivinini sokufunda lisikisela kahle ikhono ukufunda phakathi kwamagama 500 futhi 3,000 ngoba ngesikhathi esifanayo. Nokho, kulesi simo igama elithi "funda" akulona ngempela ezifanele. Isivinini sokufunda empeleni - ekuhlaziyweni kombhalo ukukhethwa uthishanhloko. Lokho abanye ulwazi umane indiva. Inhloso kuba ukuba ngifunde ukugxila kulawo imisho nemishwana athwale incazelo kakhulu futhi miss "amanzi" akuphazamisi ukuqonda okushiwo.
Imfihlo ngemadoda ayethembele
Kwenzeka isimanga, lesi sivinini sekufundza amasu ubonakele Ephakathi futhi wayaziwa abantu abaningi abadumile.
Ngokwesibonelo, Iosif Stalin kwaba umnikazi wezincwadi omkhulu. Ukufunda kuye kwaba umsebenzi nsuku zonke. Walifunda Amakhasi zezinkomo ezingamakhulu amahlanu umbhalo ngesikhathi, ne amapensela uthando eqokomisa amaphuzu ayinhloko.
UMengameli waseMelika uTeodor Ruzvelt wayezigqaja ukuthi ungumnikazi ukufunda ijubane. Kuyena, 'kwakuyithuba akuyona inkinga ngesikhathi sokufunda yonke incwadi.
Honoré de Balzac eqhosha ethi ngekhono layo ufunde kufika iziphakamiso eziyisishiyagalombili bese ukhethe kubo into esemqoka.
Aleksandr Sergeevich Pushkin ukufunda ngokushesha okukhulu. Ngaphezu kwalokho, nathi ngokwethu bazi inkumbulo yakhe lokukwazi. Imilando kungaba ukukhiqiza kabusha cishe izwi nezwi ngekhanda, nazo zonke izinsuku ezibalulekile.
Isivinini sokufunda amasu futhi okungewakho Marx, Napoleon Bonaparte, Dzhon Kennedi, u-Adolf Hitler. Mhlawumbe ngenxa yokuthi baye yimpumelelo emabhizinisini awo.
Lapho okusheshayo ukufunda indlela kuyoba usizo
Uma sikhuluma funda ngesivinini, kubalulekile ukuba sicabangele elinye iphuzu. Le ndlela isetshenziswa ngokuyinhloko ngoba befunda izincwadi zesayensi kanye lobuchwepheshe, imibiko, izihloko inthanethi, imibiko yezindaba emaphephandabeni, okungukuthi indaba kuletha ulwazi olusha.
Izinkondlo nezincwadi enzelwe ukufeza izinhloso ezehlukene kakhulu. Ngo eqanjiwe, singakhonzi ngifuna izimpendulo zale mibuzo, futhi umane ujabulele inqubo yokufunda. Lonke inani ematheksthi etemibhalo luba nomthelela ngokomzwelo, imizwelo yabantu kanye usebenzisa emcabangweni wakhe. Funda izincwadi ezinjalo ngokushesha ngangokunokwenzeka, kodwa ngokuphelele lutho.
Kungenzeka yini ukuba bafunde ukufunda ngejubane ekhaya
Namuhla, kunezindawo izifundo eziningi okukhethekile "imali encane" isithembiso ukufundisa wonke umuntu ofuna ukufunda ngesivinini afika ku 3000 emagama ngomzuzu. amaseshini Training eside kusukela kwabanenyanga eyodwa kuya kwemithathu. Kodwa ingabe ikhona yini imivuzo kokuchitha isikhathi nemali ukuze bathamele izifundo ezinjalo, uma ungakwazi ukuthuthukisa ukufunda ngejubane ekhaya ngaphandle utshalomali? Lokhu self-ucwaningo ngisho kunezinzuzo zako siqu:
nokuzikhethela ngenkululeko isikhathi ukuzijayeza kwenza ukuba afeze ukuqeqeshwa amahora uma kulungile kakhulu futhi kuzuzise.
Ukufunda amasu funda ngesivinini izincazelo umzimba kukhona ulwazi umphakathi, kungatholakala Iincwajana ezikhethekile edayiswa yimuphi esitolo sezincwadi.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela iziphazamiso.
Kungenzeka, ngokukhetha isikhathi ukuqeqeshwa, ukufunda ukulawula isikhathi.
Omunye angase abe nesithakazelo ngokubona abantu abathatha izifundo ukufunda ukufunda ijubane. Uphenyo ukusebenza kwawo akuhlali njalo omuhle. Ngokuvamile, ukuze kuzuzwe imiphumela ingabonakali ekupheleni edingekayo umkhuba ezengeziwe ezimele. Kodwa amakhono ukufunda ijubane baphendule kuphela ngokudumisa. Akekho kulabo leli khono, musa uzisole isikhathi esichithwa futhi umzamo.
Ukufunda ukufunda ngokushesha. Yini edingekayo ukuze lokhu?
Ukuze niphumelele funda ngesivinini ekhaya, udinga ukuba uzijwayeze izimiso eziyisisekelo leli khono.
Umthetho wokuqala - hhayi "gxuma" ngesikhathi ufunda. Udinga ukubheka ngokusebenzisa umbhalo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ngaphandle kokuma noma uyifunde izingcezwana akucacile. Uzobona, lapho uchubeke ufundze uyofika ekugcineni yesigaba noma ikhasi, konke akukacaci, kuyoba sobala futhi ngaphandle uyifunde.
Eyesibili umthetho - ukugqamisa amagama ambalwa ayisihluthulelo, ngayinye iziphakamiso. Ngokukhethekile, funda wonke umusho noma isigaba kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, kubalulekile ukuqonda nokukhumbula angukhiye kuphela.
Umthetho wesithathu - ngoba angathuka esenze ingozi. Isivinini sokufunda engalethi nanoma imiphi imiphumela, uma ungenawo ngigxila kulokho okufundayo. Reader kumele ngokugcwele egxilile inqubo, ngoba kubalulekile ukufunda hhayi kuphela, kodwa futhi ukuze silungise inkumbulo imininingwane ewusizo.
Kungani sifunda kancane
Wonke umuntu engibuza kutfutfukisa kufundza isivinini, kuyasiza ukwazi lokho kusenza ukufunda ngokushesha.
1. Ukufunda ngokungakhethi. Ngo ukufunda, siyinake konke. Ukuze isingeniso umcondvo lobalulekile sichitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka ukufunda kwehliswa kwelizinga lyrical ukuthi ningathwali iyiphi incazelo kanye ayiqukethe imininingwane ewusizo. Njengoba sekushiwo, ukuze wonge isikhathi, ukufunda ngejubane nqubo ihilela ekukhombeni umcondvo lomcoka endzabeni kanye kokuziba "amanzi" embhalweni.
2. Ukuphindwa ukufunda. Ngamunye wethu kukhona umkhuba omubi kusuka ebuntwaneni - ukubukeka emuva ukuba ngifunde isiphakamiso. Lapho kwakhiwa ingane silulumagama ukuphindaphinda enjalo ziwusizo. Kodwa njengoba abadala, siwenza aphume umkhuba.
3. Ukufundwa Thulile. Kufundza ngekuphimisela, singakwazi ukukwenza okusheshayo noma okulengayo, kuncike ijubane lokufunda futhi silulumagama. Lapho sifunda ngathi, ubuchopho bethu njengoba uqhuba Monologue, "othi" ulwazi ngawo sisazi. Umbhalo isivinini okuqonda akakwazi futhi iyophakama kuno-isivinini Monologue yangaphakathi. Ngakho-ke, uma unquma balukhulume funda ngesivinini indlela, isinyathelo sokuqala ukuba "ungawuzwa isikhulumi yangaphakathi," futhi ufunde ukuze abone ulwazi ngaphandle balibita ngokwami.
4. Inkambu umbono. Kuyaphawuleka ukubambezela yonke inqubo Ukufundwa inganciphisa ensimini umbono. Uma umuntu has a evuthiwe umbono neuropathy, yena ulisebenzisa bezibona umbhalo siboniswa sivinini sekufundza. Kulabo abafisa balukhulume funda ngesivinini bebodwa, bonisani ukuze sandise emkhakheni buka ziyadingeka.
5. I ukunakwa zihlakazeke. Inattention kungaba inkinga ngasiphi isivinini. Ukungakwazi ukugxilisa ingqondo esihlokweni inqubo yokufunda - lena isizathu esiyinhloko esenza ulwazi ingagciniwe, kungakhathaliseki ukuthi ijubane ungase ufunde. Le nqubo ihilela ukuthuthukiswa okucishe kufane nalokhu okufunda ngesivinini adonswa kusukela ezintweni ezenzeka ngaphandle kanye gxila umbhalo.
Bonisa ukwandisa isivinini sokufunda
Kodwa lapho Singaqala ukuze balukhulume funda ngesivinini? Ukuzivocavoca - ukuthi isihluthulelo sempumelelo. ukusebenza njalo imisebenzi elula esisebenzayo ikhuthaza izimfanelo ezidingekayo ukuze umuntu nokwenziwa okusheshayo kolwazi.
Ukuphungula inkulumo kwangaphakathi
Thina okukhulunywe ngaye ekuqaleni ukuthi ukuhambisana yangaphakathi - esinye sezizathu esiyinhloko ongaphakeme sivinini sekufundza. Kukhona izindlela ukuze zilwe nabo:
Funda ngaphakathi kusuka eziyishumi komunye. Zama, musa zigcwaliseka kusukela akhawunti, ukuqonda umbhalo.
Yenza okufanayo, kodwa kunalokho ngokubala ukuhlabelela ingoma ukuthi wazi ngekhanda.
Ukuthepha iyiphi isigqi lapho kufundwa.
Umgomo we lesi sivivinyo kwakufanele 'ukuthatha isikhulumi layo langaphakathi, "futhi sifunde ukuqonda umbhalo ngaphandle iqhaza layo.
Thuthukisa umbono neuropathy
Uma umbono neuropathy athuthukiswe ezingeni elifanele, umuntu akakwazi ukuthatha isikhathi, ezihambayo emehlweni umugqa owodwa kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla kanye ilungelo ukumboza amehlo akhe. Le ndlela ukufunda libizwa mpo. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukisa umbono neuropathy, shazi ungafunda izigaba lonke noma amabhlogo umbhalo.
Kulesi sigaba, aid kuyofika Schulte etafuleni. Esikhathini ukuboniswa ishidi square, ubude baso izinhlangothi 20 cm. It ihlukaniswe yaba imigqa ovundlile amahlanu nanhlanu mpo. Ngakho, sithola 25 amaseli, ngalinye elikwazi angena izinombolo kusuka 1 kuya 25 ngezikhathi. isikwele Ready ibekwe nehlo (25-30 cm).
Ngokusobala ukuzivocavoca wukuthi, ngokugxila kuphela isilinganiso square, usebenzisa umbono neuropathy ukuthola indawo yabo bonke izinombolo kusuka 1 kuya 25, bese oda reverse.
Omunye umsebenzi esisiza kakhulu ukufeza inhloso efanayo, ubizwa ngokuthi "Triangle". Udinga ukukhetha umbhalo bese uliphrinte ukuze umugqa ngamunye wayengaphansi ebanzi kwalowo odlule. Ngokwesibonelo, e-Umugqa wokuqala igama elilodwa, okwesibili - ezimbili eyesithathu - ezintathu nokunye. Ngenxa yalokho, sithola unxantathu, ehlanganisa umbhalo. Ukufunda ke, ukuhambisa kuphela bheka kusukela phezulu phansi. Ukuze ubone izindawo zakho zokuqala nezokugcina lemigqa eside, sebenzisa umbono neuropathy.
Lezi umzimba engenziwa ekuphileni kwansuku zonke, ngaphandle kokukhokha isikhathi esikhethekile ukuqeqeshwa. Ngokwesibonelo, ehlezi emsebenzini, ukugxila amehlo akho endabeni ethile, bese uzama ukubona ukuthi kwenzekani eceleni. Kuyoba ngesikhathi esifanayo kanye nokuzivocavoca ukuze akhulule ukungezwani emehlweni, futhi indlela ephumelela singenzi lutho ukuthuthukisa umbono neuropathy.
Isivinini sokufunda kuhilela bezibona kukhethwa umbhalo. Ngakho you phetho ulwazi oluphelele ewusizo, kubalulekile ukufunda yikuphi ukuhlakanipha ukuqagela kuphela.
Ukuze wenze izivivinyo lokhu block, udinga umsizi. Kwesokudla ukukhetha umbhalo angajwayelekile ukuphrinta. Umsizi black umaka mnyama Kwezinye izingxenye umbhalo, futhi owafundayo ke, uzama ukwenza umqondo. Okokuqala, ungakhetha ukufunda imibhalo lelula. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ukuqeqesha kuyikhono, kungcono uyeke ukukhetha ngezihloko ezingajwayelekile kanye amagama entsha ngokuphelele. Inombolo umbhalo ezifihlekile, futhi, kumelwe ukwandisa kancane kancane.
Ungathatha incwadi kanye mpo strip ububanzi 5 cm ukuvala ingxenye yombhalo, bese ukufunda lonke. Ukuhlubula nge isikhathi ukwenza abaningi.
Kufanele kukhokhelwe ukusebenza kwalesi umkhuba esisodwa ezimpondweni 3-4 izikhathi ngesonto, futhi ngemva kwenyanga ozokhula ukufunda ijubane. Exercises for amabutho ngamunye, nakuba ekuqaleni kungase kubonakale kuyinkimbinkimbi.
Ngasiphi yobudala izingane bangafundisa funda ngesivinini
I nesilulumagama ingane incane kakhulu kunaleyo umuntu omdala. Nakuba ukufunda, ecabanga, ubachazela impahla wokufundwayo futhi ukuthi uchitha okuningi isikhathi. Ngisho lapho bekuzwa izingane okusheshayo azibonayo zimbi kakhulu. Ngakho-ke, ukufunda ngejubane ukufundisa izingane kuphela ngemva kokuba ufunde ukukuqonda ngokuzimela ngokugcwele ufunde umbhalo. Lokhu kwenzeka eneminyaka engu-eminyakeni engaba ngu-14-15.
Njengoba ubona, ukuthuthukisa isivinini sokufunda ekhaya - akuyona umsebenzi onzima kangaka. Funda ngesivinini emagama ngomzuzu kuka-500 bengayi kuphela ompetha, kodwa futhi abantu abavamile. Izame futhi ufunde ke, nangesibonelo, qiniseka ukubaluleka amakhono anjalo.